Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Ee Itoobiya oo Markale isku day dil ka Badbaaday iyo Ciidanka Al Shabaab oo Buq Goosaar Qabsaday.
Tuesday August 19, 2014 - 12:43:36 in Wararka by Super Admin
Khasaara xooggan ayaa ka dhashay weerar qorshaysan oo maanta barqadii lagu qaaday kolonyo gaadiid Itoobiyaan ah oo gelbinayay Cabdi Fataax Gaal Hoose oo ah Ninka ku magacaaban guddoomiyaha gobolka Hiiraan.
Gaari Uuraal ah oo ay wateen ciidanka Xabashida Itoobiya
Wararka ka imaanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada wilaayada islaamiga Hiiraan ay weerar dhabagal ah u dhigeen ciidanka Xabashida Itoobiya oo kasoo dhaqaaqay deegaanka Buq goosaar kunasii jeeday dhanka magaalada Beled Weyne.
Wariye ku sugan gobolka Hiiraan ayaa SomaliMeMo u sheegay in gaari dagaal laga gubay maleeshiyaadka Cabdi Fataax Xasan Afrax halka Itoobiya gaari uuraal ah laga waxyeeleeyay.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in Cabdi Fataax Xasan oo dadka Reer Hiiraan u yaqaanaan "Gaal Hoose" uu si dirqi ah ku badbaaday waxaana dhimasho iyo dhaawac soo gaareen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaalida Kaba qaadka u ah.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada gumeysiga Itoobiya ay isaga baxeen tuulada Buq goosaar kadib weeraro is xigxigay oo ay shabaabul Mujaahidiin kala kulmeen.
Waa markii 2-aad oo Ninka guddoomiyaha gobolka Hiiraan ugu magacaaban DF-ka uu ka badbaado isku day dil oo lala damacsanaa.